I-My Town World Apk Download For Android [Igeyimu] - I-Luso Gamer
I-My Town World Apk Download For Android [Igeyimu]
Wake wahlela ukwakha umhlaba wamaphupho akho ngokwakha izakhiwo ezihlukene? Uma kunjalo kodwa ungakwazi ukwenza lokho empeleni ungakhathazeki ngoba lapha silethe lo mthombo ophelele we-inthanethi. Manje ukufaka i-My Town World Apk kungasiza ukufeza iphupho lakho.
Umdlalo uqala ngendaba enhle kakhulu, lapho kunezindawo ezingaphezu kuka-200+ ezahlukene. Indawo ngayinye inikeza umuzwa oyingqayizivele nezimanga. Onjiniyela bathi ingase inikeze umuzwa oyingqayizivele wokudlala kubadlali bamageyimu.
Abadinga ukukwenza nje ukulanda inguqulo yakamuva ye-My Town World Games For Kids kusuka lapha. Bese uyifaka ngaphakathi kwe-smartphone ye-android. Bese uqedela iphupho lakho ngokwakha umhlaba ophelele ogcwele izinsiza.
Liyini Idolobha Lami Umhlaba Apk
I-My Town World Apk iwuhlelo lokudlala oluku-inthanethi lwemfundo yokulingisa. Lokho kwenza izingane kanye nabantu abadala bakhe umhlaba wamaphupho abo. Ukuvakashela izindawo ezifihliwe ezingaphezu kuka-200 futhi ujabulele ukusebenzelana nezinhlamvu ezihlukene eziyi-100+.
Sithole inala yezinye izinhlelo zokusebenza zokulingisa eziningi ezahlukene. Lapho kunamathuba ahlukene okuxoxa nokujabulela ukufunda izindaba ezahlukene usebenzisa opopayi abahle. Nakuba amafayela anjalo amageyimu elungile ekunikezeni izinsiza.
Kodwa-ke uma kukhulunywa ngokuzijabulisa nokuguqulwa kwabadlali. Sabe sesithola lezo zinhlelo zokusebenza zemidlalo ezitholakalayo zilinganiselwe futhi zinomkhawulo ngemvelo. Ngemuva kokudlala izinsuku ezimbalwa, iningi labadlali bashiye imidlalo enjalo ngaphandle kwama-smartphones abo.
Nokho kugxilwe ezidingweni zabadlali kanye nesidingo sezingane. Onjiniyela bahlele uhlelo lokusebenza lokudlala olumangalisayo olubizwa ngokuthi Umhlaba Wami Wemidlalo Yedolobha. Lapho abadlali bangajabulela a Umdlalo we-3D ngekhwalithi ye-HD usebenzisa izinhlamvu ze-anime ezithuthukisiwe.
Igama Umhlaba Wami Wedolobha
Usayizi 549 MB
Unjiniyela My Town Imidlalo Ltd
Igama lephakheji mytown.mytownworld
Iyadingeka i-Android 5.0 no-Plus
Isigaba Imidlalo - Sikhungo
Labo abasha endaweni yesikhulumi futhi bajabulele kakhulu ukudlala kwangaphakathi. Futhi uzimisele ukudlala igeyimu nabangani namalungu omndeni nakho kungakwenza lokho ngokuthumela i-URL yesimemo. Ukwamukela nokwamukela isimemo kuzosiza ukujoyina inkundla mahhala.
Noma singeke sikwazi ukubona ukubhalisa okuqondile ngaphakathi kwegeyimu. Kepha kunesitolo esinemininingwane ngaphakathi komdlalo esivumela abadlali ukuthi bakhethe izinto ezahlukahlukene. Ngisho nezinto ezinjalo zingase kudingeke ukuba kwandiswe amadolobha futhi kwakhiwe izakhiwo ezintsha.
Ngaphandle kokwakha, abadlali bangaphinda badlale indima kaThisha, uMlilo, Udokotela kanye nePhoyisa njll. Nakuba ochwepheshe behlela ukwengeza ezinye izinketho ezintsha ngaphakathi. Futhi lezo zinketho ezisanda kwakhiwa zingafinyeleleka ukuze zisebenzise izinsuku ezingenayo.
Inguqulo yamahhala yomdlalo esiwusekelayo lapha inganikeza izindawo zokuqala eziyi-9 ezihlukene mahhala ngemindeni emi-2 ehlukene. Labo abazimisele ukuqhubekela phambili futhi bahlole izindawo ezintsha bangadinga imali yangempela. Ngaphandle kokutshala imali kubonakala kungenakwenzeka.
Izindlu zodoli ezihlukene ziyatholakala ukuze uzihlole futhi zingasiza ekuvuleni izici ezihlukene. Kubandakanya izipho ezihlukene nemiklomelo enezici ezincane ezingu-100+ ezengeza izilwane ezifuywayo, izinto nabalingiswa. Ngakho-ke usukulungele ukwakha umhlaba wamaphupho bese ufaka I-My Town World Download.
Izici Key of The Game
Uhlelo lokusebenza lokudlala likhululekile ukufinyelela.
Kunezindawo ezihlukene ezingu-200+ ezengeziwe.
Izinhlamvu ezingu-100+ ziyatholakala ukuze uzikhethe.
Izikhumba Ezihlukene kanye Nemiphumela ziyatholakala.
100+ izici ezihlukile ziyengezwa.
Izindlu Zonodoli zikhona ukuze zihlolwe.
Izipho Eziningi Nemiklomelo ziyafinyeleleka.
Izindawo ezintsha nezinhlamvu zizofinyeleleka ezinsukwini ezizayo.
I-interface yomdlalo iyaguquguquka futhi isebenziseka kalula.
Izithombe-skrini ze-The Game
Ungalanda Kanjani Idolobha Lami Umhlaba Apk
Inguqulo esiyinikezayo lapha ngaphakathi kwesigaba sokudawuniloda ingafinyeleleka futhi ku-Google Play Isitolo. Nokho ihlukaniswe esigabeni sokuvinjelwa. Okusho ukuthi amadivayisi afanelekile kuphela angavumela ukufinyelela nokudawuniloda ifayela le-Apk eliqondile.
Kodwa-ke, labo abangafaneleki ukufinyelela i-Apk kufanele bavakashele iwebhusayithi yethu. Ngoba lapha kuwebhusayithi yethu sinikeza kuphela amafayela e-Apk ayiqiniso nawoqobo. Ukuqinisekisa ukuvikeleka nobumfihlo babadlali bamageyimu, sifaka i-My Town World Android kuma-smartphone ahlukene ngaphambi kokuyinikeza ngaphakathi kwesigaba sokudawuniloda.
Khumbula lapha kuwebhusayithi yethu sisekela kuphela futhi sinikela ngamafayela e-Apk ayiqiniso. Ezifinyeleleka ngokusemthethweni ku-Google Play Isitolo futhi ziphephile ukuzifaka. Lolu hlelo lokusebenza lokudlala esilusekela lapha nalo olwangempela futhi aludingi ukubhalisa.
Inqwaba yemidlalo efanayo ye-android isivele ishicilelwe. Ukuze ujabulele leyo eminye imidlalo efinyelelekayo sicela ulandele izixhumanisi. Labo banjalo Isikhumba esibonakalayo ML Apk futhi I-Prerna DBT Apk.
Ngakho-ke uthanda ukudlala imidlalo yokufundisa neyengane. Kodwa uhlale ufuna ukuthola imidlalo emisha ku-inthanethi mahhala. Manje-ke mayelana nalokhu, sincoma labo badlali bamageyimu be-android ukuthi bafake i-My Town World Apk. Lokho kumahhala ukufinyelela futhi akudingi ukubhaliswa.
Izigaba Imfundo, Imidlalo Amathegi Umdlalo we-3D, Idolobha Lami Umhlaba Apk, Idolobha Lami Umhlaba Download, Imidlalo Yezingane Yedolobha Lami Yezingane, Umhlaba Wami Wemidlalo Yedolobha Imeyili kwemikhumbi
I-Manok Na Pula Apk Download For Android [Umdlalo]
I-World Box Apk Download For Android [God Game]